May 3, 2020 - Lupyo News
May 3, 2020 by Lupyo News
ဝမ်းသာစရာ ကောင်းလိုက်တာ မြို့သစ်မြို့မှ ကိုသန်းထွန်းကို မေ ၃ရက်နေ့ မနက် ၁၀ နာရီမှာ မြို့နယ်ကိုဗစ်ကော်မတီက လာရောက် ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ မနက် (၁၁ )နာရီ ၈မိနစ်အချိန်မှာမကွေးမြို့ ငါးထပ်ဆောင် ဆေးရုံကြီးကနေ မြို့သစ်မြို့ကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပါပြီ။ ကိုသန်းထွန်း ဟာ မြို့သစ် အထက(၁) မှာ Facality Quarantine (၇)ရက် ၊ သူ့ရဲ့ နေအိမ်မှာ Home Quarantine (၇) ရက် ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပြီးသွားရင်တော့ ကိုသန်းထွန်းဟာ လူနာအမှတ် (၅၃)ဘဝကနေ ကပ်ရောဂါကင်းစင် တဲ့ လူတစ်ဦးအဖြစ် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ သူ့ဘဝကို ရှေ့ဆက်လျှောက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ မကွေးတိုင်းဆေးရုံအုပ်ကြီး နဲ့ တာဝန်ရှိသူများဟာ အိမ်ပြန်မယ့်ကိုသန်းထွန်းကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ့် ကျန်းမာရေး ကိစ္စများကို မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ကိုသန်းထွန်း … Read more
ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကြက်သီးပါထတဲ့ ဘုန်းဘုန်းဦးဆေကိန္ဒလှူတဲ့ သိန်းပေါင်း 780 အလှူ …
ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကြက်သီးပါထတဲ့ ဘုန်းဘုန်းဦးဆေကိန္ဒလှူတဲ့ သိန်းပေါင်း 780 အလှူ…. ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကြက်သီးပါထတယ်အကိုရေ… ဆရာတော် မေတ္တာကြီးမားလှပါပေတယ်.. နတ်လူသာဓုခေါ်စေသော် #ဘုန်းဘုန်းဦးဆေကိန္ဒလှူတဲ့_mobile_toilet_တဲ့… တစ်လုံးကို 780000 အလုံး ၁၀၀ ၊ စုစုပေါင်းသိန်း 780 ကို ချက်ချင်းလှူပစ်တာ…..။ LelLelMoe / #U Min Min Than #မြဝတီသို့ ………. ဒီနေ့ ညနေ ၅:၃၀ မှာ ဘုန်းဘုန်း ဆီက ဖုန်းခေါ်လာပါတယ် ဟိတ်ကောင် ငဦး မင်းငါ့ကို အိမ်သာ အလုံး ၁၀၀ လောက်လုပ်ပေး။ အခု စပြီးလုပ်ပေး….ပေါပေါပဲပဲ မလုပ်နဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ပေး …. ချက်ချင်းလုပ်ပေးတဲ့ …ကျွန်တော် ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိဖြစ်ရပါတယ်….။ ကျသလောက်ငါပေးမယ်တဲ့….ဘုန်းဘုန်း တစ်ခါမှ အဲ့ဒီ့လောက် မြန်မြန် … Read more
“တစ်မိသားစုလုံး ထမင်းငတ်တော့မယ်…ကူညီပါ”ဆိုလို့ အိမ်ကို သွားစစ်ကြည့်တော့…စိစစ်ရေးမှူးပါ ငိုပြီးပြန်လာရတဲ့အဖြစ်”
“တစ်မိသားစုလုံး ထမင်းငတ်တော့မယ်…ကူညီပါ”ဆိုလို့ အိမ်ကို သွားစစ်ကြည့်တော့…စိစစ်ရေးမှူးပါ ငိုပြီးပြန်လာရတဲ့အဖြစ်” မနက်က မင်းရသ လူမှုကူညီရေး ပရဟိတအဖွဲ့ ကို ဖုန်း ဝင်လာတယ်။ တောင်ဒဂုံမှာတစ်အိမ်လုံးကို ရှာကျွေးနေတဲ့ ကောင်မလေးက ကျန်းမာရေး မကောင်းလို့ အလုပ် ခြောက်လ နားရမှာမို့ မိသားစု ထမင်းငတ်ရတော့မယ် ကူညီပါတဲ့ ……… အဖွဲ့က ဒေါက်တာတစ်ယောက် နဲ့ အတူ စိစစ်ရေးမှူး ကိုဝေကြီးက သွားစစ်တော့ သူပါ ငိုပြီး ပြန်လာရတယ်။ အကြောင်းစုံကတော့ အတူပါသွားတဲ့ စိစစ်ရေးမှူး ကိုဝေကြီးရဲ့အမျိုးသမီး မဒါ က ဟိုရောက်တော့ ရေးကြီးသုတ်ပြာ ဖုန်းဆက်တယ်။ ” ကိုမင်းရေကောင်မလေးက အစ်မ အဖွားဖြစ်သလိုဖြစ်နေတာ သွေးစောင့်တက်လိုက်တာနဲ့ ပွဲချင်းပြီးပဲ …. ဒါပေမဲ့ သူရောဂါ ဒီ‌ လောက်ဆိုးမှန်း သူမသိရှာဘူး။ … Read more
ဒေးဗစ်လားအပါအဝင် လေးဦးကို ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရက တရားစွဲဆိုမည့်နေ့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာပြီ
ဒေးဗစ်လားအပါအဝင် လေးဦးကို ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရက တရားစွဲဆိုမည့်နေ့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာပြီ။ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရက အမှုဖွင့်ထားသည့် ဒေးဗစ်လား အပါအဝင် လေးဦး ဆေးရုံဆင်းခဲ့ပါက Home Quarantine ခုနစ်ရက်ပြီးနောက် အမှုဆက်လက်ရင်ဆိုင်ရမည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်း လူဝင်မှု/လူ့စွမ်းအားဝန်ကြီး ပြောကြား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ အမှုဖွင့်ထားသည့် ဒေဗစ်လားအပါအဝင် လေးဦးမှာ ဆေးရုံမှ ဆင်းပါက Home Quarantine ခုနစ်ရက်နေရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါကာလအပြီးတွင် အမှုအား ဆက် လက်ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ လူဝင်မူကြီးကြပ် ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီး ဒေါ်မိုးမိုးစုကြည်က ပြောကြားသည်။ “သူတို့ဆေးရုံကဆင်းရရင် Home Quarantine ခုနစ်ရက်နေရဦးမယ်။ ဆေးရုံက ဆင်း မဆင်းကတော့ သေချာမသိရသေးဘူး။ ဒီနေ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ မပါဘူး“ဟု ဒေါ်မိုးမိုးစုကြည်က ပြောကြားသည်။ ဒေးဗစ်လားအပါအဝင် သင်းအုပ်ဆရာ အမှုတော်ဆောင်နှင့် နဝရတ်တေးသံသွင်းမှ ဦးဝေထွန်းတို့အား သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ … Read more
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အရမ်း ဖက်တွယ်မိတဲ့အခါ ကိုယ့်မှာ ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့ အရာ(၄)ခု
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အရမ်း ဖက်တွယ်မိတဲ့အခါ ကိုယ့်မှာ ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့ အရာ(၄)ခု တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ချစ်မိတာက အပြစ်မဟုတ်ပေမယ့် လိုတာထက်ပို တွယ်ငြိမိရင်တော့ ကိုယ့်အတွက် နာကျင်စရာတွေ များလာတတ်ပါတယ်။ အချစ်ဆိုတာ ချစ်နည်းမှန်ကန်ဖို့လည်း လိုအပ်ပြီးတော့ မချစ်တတ်ရင် ကိုယ့်ရဲ့အချစ်က ကိုယ့်ကိုယ်ဒုက္ခပြန်ပေးတတ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အရမ်းဖက်တွယ်မိရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆုံးရှုံးနိုင်တယ် ဒီလိုဆိုးကျိုးတွေကို သင်ကြုံတွေ့ရမှာပါ။ ကိုယ့်အချစ်က ဈေးပေါသွားမယ် … ပေါပေါလောလာရတဲ့ အရာတိုင်းက ဈေးပေါတယ်ဆိုသလိုပဲ တစ်ဖက်လူကလည်း တန်ဖိုးထားမှု လျော့နည်းတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကသူ့ကို ဆုံးရှုံးရမှာ ကြောက်တဲ့စိတ်ကြောင့် သူပြောသမျှ လိုက်လုပ်နေမိတဲ့အခါ၊ သူကိုယ့်ကိုယ် ငြိုငြင်သွားမှာ ကြောက်လို့ လိုတာထက် ပိုအလိုက်သိလွန်းတဲ့အခါ၊ သူ့စကားတိုင်းကို လိုက်နာလွန်းတဲ့အခါ သင့်ရဲ့အချစ်က တန်ဖိုးလျော့လာတတ်ပါတယ်။ သူ့စိတ်ထဲမှာ ငါမချစ်ရင် သူမနေနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ဝင်သွားပြီး သင့်ဆီက ရတဲ့ပေါပေါလောလော … Read more
ကြက်ကင်နှင့် မြူဆွယ်၍ လမ်းဘေးခွေးလေးများကို ဖမ်းဆီးပြီး အသားကင်လုပ် ရောင်းချနေသည့် စုံတွဲ…
ကြက်ကင်နှင့် မြူဆွယ်၍ လမ်းဘေးခွေးလေးများကို ဖမ်းဆီးပြီး အသားကင်လုပ် ရောင်းချနေသည့် စုံတွဲ… ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ညောင်ရွှေမြို့တွင် လမ်းဘေးခွေးသတ်ဖြတ်သူများအား မေ ၁ ရက်နေ့ ည ၆နာရီခန့်ကဖမ်းမိခဲ့သဖြင့် ရဲစခန်းသို့အပ်နှံကာ အမှုဖွင့်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ညောင်ရွှေမြို့နယ် ခွေးချစ်သူများအဖွဲ့မှ သိရသည်။ အဆိုပါ ဖမ်းမိသူ ၂ ဦးကို မသင်္ကာသဖြင့် စုံစမ်းနေသည်မှာ ရက်ပိုင်းကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး မေလ ၁ရက် ညတွင်မူ သက်သေခံခွေးသေနှင့်အတူ လက်ရဖမ်းမိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ခွေးချစ်သူများ (Dog Shelter-DHT) အဖွဲ့ဥက္ကဌ ဦးသန်းလှိုင်က ပြောသည်။ “အသားကင်ဆိုင်မှာ စောင့်ကြည့်နေတာ။ မကင်ဘဲ အစိမ်းလိုက် ၁၅၀၀ ဖိုး ၀ယ်သွားတယ်ဆိုတော့ သေချာပြီဆိုပြီးလိုက်တာမှာ ခွေးအသေကောင်နဲ့အတူ ဖမ်းမိလို့ ရဲစခန်းကို အပ်ခဲ့ပါတယ်။ လတ်တလော ရဲစခန်းက ခံဝန်ပေးထားကြောင်းသိရပါတယ်။ တရားလိုအနေနဲ့ … Read more
ကိုဗစ် ကာလအတွင်း စားစရာ အခက်အခဲရှိလို့ သမီးလေးရဲ့ အဝတ်အစားလေးတွေကို မရောင်းရက်ပဲ လာရောင်းတဲ့ အဘတစ်ယောက်ရဲ့ (ရုပ်/သံ)
ကိုဗစ် ကာလအတွင်း စားစရာ အခက်အခဲရှိလို့ သမီးလေးရဲ့ အဝတ်အစားလေးတွေကို မရောင်းရက်ပဲ လာရောင်းတဲ့ အဘတစ်ယောက်ရဲ့ (ရုပ်/သံ) ဗီဒီယို ဖိုင်ကို အောက်ဆုံးမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်… အဘဟာ တခြိန်ကေတာ့ မိသားစုကို ဆိုက်ကားနင်းပြီး ရွာဖြွေကှေးမွေးခဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ…အဘရဲ့ အသက်ကေတာ့ ၇၀ ကြော်သွားပါပြီ တခြိန်က မိသားစုကို ခွန်နဲ့အားနဲ့ ရွာဖွေ ကြှေးခဲ့ပေမယ့် အခုခါမွာတော ဇရာဆိုတဲ့ အိုခြင်းတရားက နွိပ်စက်လို့ ဆိုက်ကား မနင်းနိုင်တော့ဘူး အ ခု လဲ လက် ထဲ မှာ ပိုက် ဆံ တ ပြား မှ မ ရှိ တော့ လို့ တဲ့ သ မီး လေး ရဲ့ အ … Read more
မေ လ ၅ ရ က် နဲ့ ၈ ရက်နေ့ မှာ စောင့်ကြည့်ရမ ယ့် ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ
မေ လ ၅ ရ က် နဲ့ ၈ ရက်နေ့ မှာ စောင့်ကြည့်ရမ ယ့် ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ ဖြစ် စဉ်များ အာကာသအတွင်း ထူးခြားမည့်ဖြစ်စဉ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ မြင်တွေ့ရမည့် အရာများအကြောင်း ရေးသားပေးပါဦးမယ်။ အာကာသအကြောင်းမပြောမီ ယခု မေလဆန်းပိုင်းမှာ ဖြစ်မည်၊ မဖြစ်ဖူး၊ လာမည်၊ မလာဘူး နှင့် တစ်ရက်နှင့် တစ်ရက် မှန်းဆလို့ မတူနိုင်တဲ့ ကပ္ပလီပင်လယ်က အပူပိုင်း မုန်တိုင်းတစ်ခုအကြောင်း သိသလောက် ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ မူလက ဒီအပူပိုင်းမုန်တိုင်းဟာ ကပ္ပလီပင်လယ်မှာ အစပျိုးပြီး မေ လဆန်း (၂-၃) ပိုင်းမှာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဘက်ကို ဝင်ဖို့ တာဆူနေခဲ့တာပါ။ ဒီကြားထဲမှာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ဘက်က လေစီးကြောင်းတစ်ခု ဝင်ရောက် နှောက်ယှက်မှုကြောင့် ပျက်ပျယ်မလိုဖြစ်ရင်းက.. ယခုတဖန် … Read more
ဗိုက်ဆာလို့ ကျောင်းမှာ လာတောင်းစားနေတဲ့ သူတောင်းစားကို ဘုန်းကြီးက အုပ်ခဲပုံရွှေခိုင်းလိုက်သောအခါ…
ဗိုက်ဆာလို့ ကျောင်းမှာ လာတောင်းစားနေတဲ့ သူတောင်းစားကို ဘုန်းကြီးက အုပ်ခဲပုံရွှေခိုင်းလိုက်သောအခါ… ဗိုက်ဆာလို့ ကျောင်းမှာ လာတောင်းစားနေတဲ့ သူတောင်းစားကို ဘုန်းကြီးက အုပ်ခဲပုံရွှေခိုင်းလိုက်သောအခါမှာ..တစ်နေ့မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းကို လက်တစ်ဖက်တည်းရှိတဲ့ သူတောင်းစားတစ်ယောက် ရောက်လာပြီး စားစရာလာတောင်း စားတယ် ..အဲ့မှာ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးနဲ့ တိုးတော့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဆီမှာ စားစရာတောင်းတယ်။ ဆရာတော်က ဆွမ်းစားဆောင်ရှေ့ က အုတ်ပုံကို လက်ညိုး ထိုးပြ ပြီး “ဒကာတော် အဲ့ဒီအုတ်ပုံကို ဆွမ်းစားဆောင်နောက် အရင် ရွေ့ပေးပါအုန်း ” လို့ မိန့်တော်မူတယ်။ အဲ့တော့ လက်ပြတ် သူတောင်းစားက ဘုန်းကြီးကို မကျေမနပ်နဲ့ ပြောပါတယ်“ အရှင်ဘုရား။ တပည့်တော် မှာ လက်တစ်ဖက်တည်းရှိတာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဒီအုပ်ပုံကို ရွေ့နိုင်မှာလဲ အရှင်ဘုရား ဆွမ်းကျန် … Read more